Sida loo sameeyo Flash Banner la Flash Banner arrimo
> Resource > Talooyin > Samee Flash Banner la Flash Banner arrimo
Waxaa jira badan oo boorar flash la yaab leh oo ku saabsan noocyada kala duwan ee website-yada. Dad badan oo aan aniga ku jiro waxa ay jecel yihiin oo aad u badan, oo ay doonayaan inay noocan oo kale ah calan u websites noo gaar ah si aad u cad ah, laakiin mar walba ka baqina kuwa xirfadaha flash. Sida arrin xaqiiqda ah, flash xirfad mushkilad ma aha. Waxaan weli ma oga karaan iyaga oo aan wax xirfad flash. Waxa aynu u baahan tahay oo kaliya gaare flash ah banner badan oo cajiib ah arrimo banner flash , sida Flash Gallery Factory . Waxay naga caawin kartaa abuuro banner flash ah la arrimo ku daqiiqo. Sidaa darteed, aad haatan kartaa hal abuur xayeysiis banner flash on websites aad. Kaliya talaabooyin dhowr ah oo loo baahan yahay.
1 Ku rakib abuure banner flash ah
Marka hore, qalab download iyo rakibi flash banner qaadashada, ka dibna waxa ay maamulaan in Muqaal Mode (Select Gallery Mode samaynta qabow 3D Sawirada).
2 Imput iyo abaabulo sawiradaada
Waxaad soo dhoofsadaan kartaa sawiro, oo loo diyaariyey ka hor qalabka tafatirka image xirfad qaar ka mid ah, sida Photoshop ama kaliya dejinta iyo xaalkaa photos asalka la filtarrada dhisay-in qalab tafatirka, sida abuurka, qoqobada, waxaa ka mid ah, iwm. Gaar ahaan, waxaad ku dari kartaa HyperLink ah sawir kasta. Halkan
3 dar arrimo banner flash iyo saamaynta
In Template tab, u tag Simple category flash template dooro inta badan la isticmaali "RedRight" template. Markaasuu u baddashaan saamayn tab iyo in tab-guurka dooro "libdhi" saameyn kala guurka. Ka dib markii in, xaq riix mid ka mid sawir ah oo ku saabsan Storyboard iyo dooran Photo Guryaha si ay u dejiyaan "Photo Duration" sida 2 labaad, ka dibna hubi ikhtiyaarka "Codso muddo hadda dhammaan sawiro" ee la soo dhaafay.
4 Ku dar caption u iftiimiyo banner
Waxaad si aad banner flash ku dari kartaa caption si ay u embellish. "Qurxisaa" banner flash la qoraalka, guji "Text New" in lagu daro qoraalka, font dooro, size, midabka, saamayn qoraalka, iyo wixii la mid ah ee sawiradaada.
5 naadiya aad banner flash
Dhaafsadaan qaar ka mid ah "naadiya Settings" ama Flash banner ugu fiican. Si tan loo sameeyo, guji "naadiya Settings", marka hore la beddelo Xulashada laab si ay "laab toos ah", halka goobaha kale ee sida tayada flash iyo Background Color, kaliya waa inaad u daysaan karaa haddii aadan u baahan in la beddelo. Halkan Waxaan sidoo kale cadee HyperLink ah dhamaadka flash slideshow. Ka dib markii sameeyey, guji "Abuur Jabbuuti oo Movie" si ay u daabacaan aad banner flash. Ka hor inta uusan bilaaban guud ahaan banner flash, sidoo kale beddeli kartaa size flash banner uu ku noqon karo iyadoo la raacayo size sawirka si aad u hesho sida ugu fiican oo tayo leh ee banner flash.
Waa hagaag, hadda banner flash waa lagu arki doonaa dunida oo dhan. dhexgalaan banner flash ee aad website ama Cudarada ee bogga internet oo aad jeceshahay. Halkan ka eeg sida loo Cudarada flash ee code HTML. Waxa ay noqon doontaa calanka la yaab leh ka fiican yahay sidii hore. Ma doonaysaa in aad u gaar ah banner flash? Just u qaban la Flash Gallery Factory keligaa.